News 18 Nepal || प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै शिर्ष नेताले कस्तो दिए प्रतिक्रिया ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्थापना गरिदिएर देशलाई विधिको शासनको मूल ट्रयाकमा फर्काइदिएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेलगत्तै बाह्रखरीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै थापाले सर्वोच्चले सनकको शासनलाई लगाम लगाइदिएको बताए ।
“सर्वोच्च अदालतले फेरि एक पटक जस्तोसुकै अफ्ठ्यारोमा पनि हाम्रो न्यायलयसँग विवेक पुर्‍याएर निर्णय गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संविधानको रक्षक राष्ट्रपति चुक्दै गर्दा न्यायपालिकाले देशलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ ।” उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको बताए ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायालयले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको समेत ऐतिहासिक रुपले पुष्टि गरेको बताएका छन् । उनले न्यायको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले न्यायालय प्रति जनताको बिश्वासलाई नयाँ उचाइमा उठाएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई लाख लाख सम्मान भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै शर्माले न्यायाधीशहरूलाई सलाम भनेका हुन् ।
‘संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘फैसलाले विघटनसँगै अधिनायक आकांक्षालाई समेत बदर गरेको छ l संविधान रक्षा गर्दै जनताको जीत भएको छ l’
पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय र आफ्नो गरिमालाई उचा गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेसँगै उनले मुलुक, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा गरेर ३ करोड नेपालीको सम्मान प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् , ‘सर्बोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायलय र आफ्नो गरिमालाई उचा गरेको छ । मुलुक, लोकतन्त्र र ब्यबस्थाको रक्षा गरेर ३ करोड नेपालीको सम्मानप्राप्त गरेको छ । सम्माननीय प्रधानन्ययधिश र माननीय न्यायधिशज्यूहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभर ब्यक्त गर्दछु । जनताको जित, लोकतन्त्रको जित ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने गरी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलवार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो ।
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सर्वोच्च अदालतले दूरगामी र ऐतिहासिक फैसला गरेको प्रतिक्रिया गरेका छन् । मंगलवार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको छ ।
सोही बारे सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले लोकतान्त्रिक मााध्यमबाटै तानाशाह बन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास विफल भएको बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अस्पताल शय्याबाटै ट्वीट गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको खबरले रोगै हराए जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कस्तो सुखद संयोग !’ उनले लेखेका छन्, ‘अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मनचाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो ! हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो, उनले लेखेका छन् ।